XOG Hoose: Puntland oo dalbatay in la beddalo Fahad Yaasiin kaddib markii | SMC
Home WARARKA MAANTA XOG Hoose: Puntland oo dalbatay in la beddalo Fahad Yaasiin kaddib markii
XOG Hoose: Puntland oo dalbatay in la beddalo Fahad Yaasiin kaddib markii
Madaxweynaha Puntland ayaa codsaday in xilka laga qaado dhammaan taliyeyaasha ciidamada kale duwan ee DFS.
Wada-hadal qadka telfoonka ku dhexmaray madaxweynayaasha Maxamed Farmaajo iyo Saciid Deni ayay kaga hadleen xaaladda dalka oo ay aad ugu kala aragti duwanaadeen sida shabakadda Warqaad ay ka soo xigatay ilo muhiim ah.
Labada madaxweyne oo qorshuhu ahaa in khilaafka doorashada ay ka wada hadlaan iyo sidii shirka Muqdisho uu uga soo qeyb gali lahaa Deni ayaa waxaa gebi ahaanba arrintaasi ganafka ku dhuftay MW Deni.
MW Deni ayaa sheegay in aan la isku hallayn karin amniga magaalada Muqisho, islamarkaana loo baahan yahay in la beddalo hoggaanka ciidamada iyadoo sidoo kale laga duulayo wixii Daljirka Dahsoon ka dhacay 19-kii bishaan.
Wuxuu sheegay in Puntland ay shirka kaga qeyb geli karayso in la beddalo taliyeyaal uu ugu horreeyo midka hay’adda NISA Fahad Yaasiin, kan Booliska, taliyaha Millateriga iyo kan Asluubta.
Shuruuddani iyo kuwa kale oo ay Puntland ku xirtay ka qeyb galka shirka Muqdisho ayaa u muuqda kuwa dhanka Villa Somalia aynaan fulin karin.
Fahad Yaasiin, agaasinka hay’adda nabad sugidda qaranka ee NISA ayaa ah gacanta midig ee MW Farmaajo, waa ayna adag tahay in uu xilkaasi ka xayuubiyo.
Previous articleMidowga Musharixiinta oo ka jawaabay go’aankii dowladda Soomaaliya
Next articlePuntland oo 14 Maalin u qabatay Shaqaalo ka tirsan QM